November 2019 – Trend.com.mm
ပရိသတ်တွေချစ်ကြတဲ့ မင်းသမီး Park Bo Young ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတစ်ချို့
Posted on November 29, 2019 by Noel
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ “Strong Woman Do Bong Soon” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက ချစ်စရာမင်းသမီးချောလေး Park Bo » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on ပရိသတ်တွေချစ်ကြတဲ့ မင်းသမီး Park Bo Young ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတစ်ချို့
ဘဝမှာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး နေတတ်ဖို့ …
Posted on November 29, 2019 November 29, 2019 by Wint
ဘဝမှာ အရိုးရှင်းဆုံးနေတယ်ဆိုတာကို လူတွေဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားကြလဲ။ ရှိတာလေးနဲ့ ရောင့်ရဲ့တင်းတိမ်ပြီး ဘာကိုမှ မမက်မောခြင်းကိုပြောတာလား။ တချို့ ကတော့ အိပ်မက်တွေရှိ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, WellbeingLeaveaComment on ဘဝမှာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး နေတတ်ဖို့ …
သီဟိုဠ်စေ့ဟာ တစ်ချို့သောအစားအစာတွေမှာပါဝင်တတ်သလို ဟင်းလျာတွေထဲမှာလည်းပါဝင်တတ်ပါတယ်။သရေစာအနေနဲ့လည်းစားပေးနိုင်တဲ့အရသာရှိတဲ့အစေ့တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီသီဟိုဠ်စေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေဘယ်လောက်များရှိနိုင်မလဲ?လေ့လာချက်တွေအရ တစ်နေ့ကို သီဟိုဠ်စေ့ ၄ စေ့စားပေးမယ်ဆိုရင်… *ဆံသားတွေတောက်ပလာမယ် သီဟိုဠ်စေ့မှာပါဝင်တဲ့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleLeaveaComment on တစ်နေ့ကို သီဟိုဠ်စေ့ ၄ စေ့စားပေးမယ်ဆိုရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲ?
တောင်ကိုရီးယားရဲ့  အမိုက်စားအဆိုတော်မလေး HyunA ကတော့ သူမရဲ့စိတ်အခြေအနေကို ဖွင့်ဟလာခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ ၂၈ရက်နေ့က သူမရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ထားရတယ်ဆိုတာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in K-Pop, Music, NewsLeaveaComment on သူမရဲ့စိတ်အခြေအနေအကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ HyunA
၀ိတ်ချချင်ပေမဲ့ ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့မှ မကျပဲဖြစ်နေပါသလား?ဒီနည်းလေးတွေကို တစ်ခေါက်စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦး *ခါးမှာဖဲပြားကြိုးချည်ထားပါ နေ့လည်စာ ဒါမှမဟုတ် ညစာစားခါနီးမှာ ဖဲပြားချည်ထားပါ။စားရင်းနဲ့ဖဲပြားချည်ထားတဲ့ကြိုးတင်းကျပ်လာပြီဆိုရင်တော့ သင်ဆက်မစားသင့်တော့ပါဘူး။ဒီနည်းလေးကရိုးရှင်းပေမဲ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleLeaveaComment on သင်သတိတောင်မထားမိပဲ ၀ိတ်ကျသွားစေမယ့်နည်းလမ်းကောင်းများ
Posted on November 28, 2019 November 29, 2019 by Noel
ချောင်းဆိုးနေရင် ညဘက်တော်တော်နဲ့အိပ်လို့မရပါဘူး။ဒီတော့ ချောင်းအရမ်းဆိုးနေတာကို ချက်ချင်းသက်သာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ? – ဆား ချောင်းအရမ်းဆိုးနေတဲ့အခါ ဆားစားပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဝက်နဲ့ ရေနွေးဖြူဖန်ခွက်တစ်ခွက်စာကို ရောမွှေလိုက်ပါ။စက္ကန့် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleLeaveaComment on ချောင်းဆိုးတာကို ချက်ချင်းသက်သာသွားစေနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကောင်းများ
Posted on November 28, 2019 by Wint
Onward ဟာ အမေရိကန် Animated Fantasy ဇာတ်လမ်းအမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။ Pixar Animation Studios နဲ့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Hollywood, Movies, NewsLeaveaComment on ဒီကားလေးကို ကြည့်ဖို့အဆင့်သင့်ဖြစ်နေကြပြီလား
BTS ရဲ့ အမာခံပရိသတ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလာတဲ့ မင်းသမီး Lee Young Ae
နာမည်ကျော်တောင်ကိုရီးယားမင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Lee Young Ae ဟာ မကြာသေးခင်က အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ သူမဟာ ကေပေါ့ပ်အဆိုတော်အဖွဲ့ BTS » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in UncategorizedLeaveaComment on BTS ရဲ့ အမာခံပရိသတ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလာတဲ့ မင်းသမီး Lee Young Ae
Netflix ရဲ့ကိုရီးယားစီးရီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ‘Kingdom’ seasons2နဲ့3မှာ မင်းသမီး Jun » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, MoviesLeaveaComment on ‘Kingdom’ seasons2နဲ့3မှာ ပါဝင်လာတော့မယ့် မင်းသမီး Jun Ji Hyun
ပရိသတ်တွေမျှော်လင့်ထားသလို မင်းသမီးချောလေး Kim Tae Hee ကို မကြာခင်ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်လေးမှာ ပြန်လည်မြင်တွေ့ရပါတော့မယ်။နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့က » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်မှာပါဝင်ဖို့ လက်ခံလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးချော Kim Tae Hee